Idi China FK814 Automatic Top&Bottom Labeling Machine factory and suppliers |Fineco
FK814 Akpaaka n'elu&Ike Labeling Machine
① FK814 dabara maka ụdị nkọwa ọ bụla igbe, mkpuchi, batrị, katọn na mgbe niile na ewepụghị isi ngwaahịa labeling, dị ka nri nwere ike, plastic cover, igbe, ihe egwuregwu cover na plastic igbe ekara ka akwa.
② FK814 nwere ike nweta akara n'elu na ala, akara mkpuchi zuru oke, akara akụkụ ziri ezi, akara akara multi-labelụ kwụ ọtọ na akara akara multi-label, nke a na-ejikarị na katọn, elektrọnik, nri na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
Nkọwa aha aha:
FK814 nwere ọrụ ndị ọzọ iji mụbaa:
1.configuration koodu ngwa nbipute ma ọ bụ ink-jet ngwa nbipute, mgbe labeling, bipụta doro anya mmepụta batch nọmba, mmepụta ụbọchị, irè ụbọchị na ozi ndị ọzọ, codeing na labeling ga-rụrụ n'out oge.
2.configuration ngwa nbipute,gbanwee ọdịnaya ngwa nbipute n'oge ọ bụla,aghọta ọrụ nke ibipụta na labeling n'otu oge.
3.Automatic nri ọrụ (jikọtara na ngwaahịa ngwaahịa);
Ọrụ nchịkọta ihe 4.Automatic (jikọta ya na nleba anya ngwaahịa);
5.Mụbaa ngwaọrụ ịde aha;
Usoro nhazi FK814 dị mfe:
1.Adjust n'elu labeling usoro dị elu banyere 2mm karịa ngwaahịa
2.Adjust ala labeling usoro ala banyere 2mm karịa ngwaahịa ala.
3.Adjust conveyor belt na labeling ọsọ na ihuenyo mmetụ ka ha chọrọ dakọtara.
4. Gbanwee ọnọdụ nke ihe mmetụta ka akara ọ bụla wee gwụchaa.
5.Adjust elu nke ahịhịa , ka ahịhịa nta metụ n'elu labeling elu nke ngwaahịa.
Oghere ala FK814 gbasara 1.74 stere.Nhazi nkwado igwe.
Igwe akara akara FK814 nwere ụzọ ngbanwe dị mfe, izi ezi dị elu na ịdị mma dị mma, dabere na ihe achọrọ nke izizi dị elu, ngwaahịa mmepụta dị elu, yana ọ siri ike iji anya gba ọtọ hụ njehie ahụ.
Nha karama suit (mm) L: 40 ~ 400 W: 40 ~ 200 H: 0.2 ~ 150; Enwere ike ịhazi ya
Nha akara suit (mm) L:6-340mm;W(H):15-130
Nha igwe (L*W*H) ≈1930*695*1390(mm)
Nha ngwugwu(L*W*H) ≈1950*730*1450(mm)
Akwụkwọ mpịakọta ID:Ø76mm;OD: ≤240mm
2 Isi Labeling kacha Ịkpọ aha n'elu, isi nke akara ngosi, gụnyere akara-ikuku na nhazi ụgbọ ala
3 Isi akara akara ala Ịkpọ aha na ala, isi nke akara ngosi, gụnyere akara-ikuku na nhazi ụgbọ ala
4 Ihe mmetụta ngwaahịa Chọpụta ngwaahịa
5 Efere na-ehichapụ aha Kpochapụ akara site na akwụkwọ ntọhapụ
6 Ahịhịa N'elu akara mara mma
7 Ihuenyo mmetụ aka Ọrụ na ntọala paramita
8 Ngwaọrụ na-ewusi ike Pịa ngwaahịa akpọpụtara iji mee ka ntinye aha sie ike
9 Efere mkpokọta Chịkọta ngwaahịa ndị akpọrọ
10 Igbe eletrik Debe nhazi eletrọnịkị
11 Ụzọ nche akụkụ abụọ Debe ngwaahịa na-aga ozugbo, enwere ike ịhazi ya dabere na nha ngwaahịa.
3. Mgbe ihe mmetụta ahụ chọpụtara na ngwaahịa ndị ahụ eruola ebe a na-achọsi ike, igwe ahụ ga-ezipụ akara ahụ na brush na-ejikọta akara ahụ na ngwaahịa ahụ, a na-emecha usoro ntinye aha.
Nke gara aga: Igwe eji akara kaadị FK812 akpaaka / akpa / katọn
Osote: Igwe eji akara akara FK815 akpaaka akụkụ akụkụ akụkụ
Akpaaka ala akara
Igwe ndopụta ahịrị nrụpụta akpaaka nke ala
Isi Labeling Bottom
Igwe ndo aha n'okpuru
Igwe ndopụta ahịrị nrụpụta ala
igbe n'elu na ala elu igwe labeling
katọn igbe elu na ala labeling igwe
katọn elu na ala labeling igwe
igbe rọba elu na ala elu igwe na-ede aha
igwe na-edobe elu na ala
elu na ala laeller
FK839 Akpaaka n'ala mmepụta ahịrị akara...